Toliara – Page 5 – Midi Madagasikara
Toliara : Manameloka ny herisetra ny ministeran’ny Serasera
Redaction Midi Madagasikara 9 janvier 2014 herisetra, Manameloka, ministera, Serasera, Toliara
Na dia efa milamina aza ny raharaha mahakasika fanaovana herisetra tamin’ny mpanao gazetin’ny RNM/TVM Toliara, Siely Landernaux, ny asabotsy hariva teo, dia manameloka ny fihetsika tsy faseho masoandro mamoehatra amin’ny fikasihan-tanana mpanao gazety ny minisiteran’ny Serasera. Omaly ihany dia nampanantsoin’ny raiamandrenibe mpitan-kazomanga avy ao amin’ny Toko be telo, izay foko niavian’ilay kandidà depiote sy ilay…
Toliara : Kandidà depiote mamo, nidaroka mpanao gazetin’ny TVM
Redaction Midi Madagasikara 8 janvier 2014 Kandidà depiote, mamo, Mpanao gazety, nidaroka, Toliara, TVM
Tsy mety fay ary misy mpanao politika sasany tsy maty voalavo an-kibo mihitsy tsy mahazaka resy. Ny asabotsy hariva teo tokony ho tamin’ny 5 ora dia notafihana kandidà depiote Toliara I iray, izay tsy lany tamin’ny fifidianana farany teo iny, niaraka tamin’ny namany teo imasom-bahoaka sy ny mpiara-miasa aminy, tao amin’ny toeram-piasany, ny namana Mpanao…
Toliara : Vehivavy 28 taona namono tena
Redaction Midi Madagasikara 6 janvier 2014 namono tena, Toliara, Vehivavy
Vehivavy iray 28 taona mbola erotrerony nisarahan’ny vadiny no nikasa hanapitra ny ainy rehefa nitelina fanafody 30 ny asabotsy antoandro teo tany Toliara. Tsy zakany ny fandaozan’ilay olon-tiany azy. Ny zanany 5 taona nitomany sy nikiakiaka mafy no nanaitra ny manodidina. Avotra soa man-tsara ihany izy na dia efa nalemilemy aza. Raha ny fanampim-baovao voaray…